20. oktober 2020 - NorSom News
Home 2020 Oct 20
Norsomnews - 20. oktober 2020 0
Maxkamada magaalada Trondheim ayaa nin afartameeyo jir ah ku xukuntay 30 maalmood oo xabsi ah iyo magdhow 375.000 kr, kadib markii lagu helay inuu...
Guri: Macalimiinta Norway, xor bey u yihiin inay ardeyda tusaan sawirada laga sameeyo nabi Muxamed.
Maalintii jimcaha aheyd waxaa dalka Faransiiska lagu dilay nin macalin ahaa oo ardeyda fasalkiisa tusiyay sawiro farshaxan ah oo loo ekeysiiyay nabi Muxamed NNKH....
Barafkii oo gobolada qaarkood ka bilowday. Booliska oo baabuurleyda u digayo.
Habeenki xalay waxaa gobolada Bariga iyo koonfurta dalkan Norway ka da´ay baraf bilow ah, kaas ahaa mid horey loo sii saadaalinayay. Magaalooyinka Kongsberg iyo...